Ixabiso elingatshintshiyo (UNI) lonyuka nge-3.82% Izolo, ukonyuka okuthe kratya kulindelwe
Ukuhlaziywa: 18 Februwari 2021
Uhlalutyo lwamaxabiso olungatshintshiswanga-ngoFebruwari 18
Kwimeko apho iinkunzi zeenkomo zikwazile ukutyhala ixabiso kwaye zivale ngaphezulu kwenqanaba lokumelana ne- $ 24, ke, inqanaba lokumelana ne- $ 27 kunye ne- $ 30 iya kuba yeyona nto kujoliswe kuyo. Ukungakwazi ukuvala ngaphezulu kwenqanaba lokuchasana elikhankanyiweyo kunokuvumela abathengisi ukuba batyhale ingqekembe iye kwi-21, $ 17 nakwi-14 yamanqanaba enkxaso.
Amanqanaba okumelana: $ 24, $ 27, $ 30
Kwimbonakalo yexesha elide, i-Uniswap inyusa. Ingqekembe yaqhekeka kwimodi yokudityaniswa ngoJanuwari 13. Amanqanaba okuxhathisa angaphambili eedola ezili-17, iidola ezingama-21 zangeniswa ngenjongo yomthengi yokuqhubeka nokuthenga ingqekembe. Kwinqanaba lokumelana ne- $ 24, intshukumo ye-bullish yaba buthathaka kwaye ixabiso labuyela umva ukuphinda ubuye kwinqanaba lexabiso le- $ 17. Iinkunzi zenkomo zifumana uxinzelelo ngakumbi lokunyusa amaxabiso ukuya kukumelana nokuphakama okuphezulu kwi- $ 24 ukuphinda-phinda okwesibini.
Ungatshintshi itshathi yemihla ngemihla, ngoFebruwari 18
Ixabiso ngoku lihleli kwinqanaba lenkxaso kwi-21 yeedola ngekhandlela lemihla ngemihla elibonisa ukuba iinkunzi zeenkomo zivula intengiso yanamhlanje. Ngaphaya koko, i-Relative Strength Index iyagoba ngaphezulu kwamanqanaba angama-60 ichaza ukonyuka kwexabiso le-UNI. Kwimeko apho iinkunzi zeenkomo zikwazile ukutyhala ixabiso kwaye kuvale ngaphezulu kwenqanaba lokumelana ne- $ 24, ke, inqanaba lokumelana ne- $ 27 kunye ne- $ 30 iya kuba yeyona nto kujoliswe kuyo. Ukungakwazi ukuvala ngaphezulu kwenqanaba lokuchasana elikhankanyiweyo kunokuvumela abathengisi ukuba batyhale ingqekembe iye kwi-21, $ 17 nakwi-14 yamanqanaba enkxaso.
I-UNIUSD yeXesha eliPhakathi leTrend: Bullish
Ingqekembe ikwintshukumo yokuqhubela phambili. Abathengisi abanawo amandla afanelekileyo okutyhala ingqekembe iye ezantsi ngaphaya kwenqanaba lenkxaso kwi-17 leedola xa bekukho ukubuyela umva. Ukunyuka okungafunekiyo kuyenyuka kwaye kuphule inqanaba lokumelana ne- $ 21 ukuya kwinqanaba lamaxabiso angama- $ 24. Ukunyuka kwamaxabiso kulindeleke.
Ungatshintshi itshathi yeeyure ezi-4, ngoFebruwari 18
Nangona kunjalo, ixesha lesalathiso samandla esihlobo se-14 sikhomba phezulu kumanqanaba angama-60 sibonisa umqondiso wokuthenga. Ingqekembe inokwahlula inqanaba lama- $ 24 kwaye ijolise kwinqanaba lamaxabiso angama- $ 27.
Uhlalutyo lwamaxabiso olungatshintshiswanga-ngoFebruwari 8
Ukuhlaziywa: 8 Februwari 2021
I-Uniswap (i-UNI) ibisoloko iqalile ukusukela oko kuqala unyaka kunye ne-capitalisation yentengiso inyuke malunga ne-280% kumanani ayo omhla ukuza kuthi ga ngoku. Nangona i-cryptocurrency ithengise ngesantya sokudakumba ngoFebruwari, ukubakho komnye umlenze phezulu kubonakala ngathi kunokwenzeka.
IntoTheBlock's In / Out yeMali ejikeleze amaxabiso (IOMAP) ibonisa ukuba kuncinci kakhulu ukungahambelani nokungatshintshi kwinqanaba lexabiso langoku ($ 19.44). Endaweni yoko, imodeli ityhila ukuba kukho udonga olukhulu lwebango olulele phambili kwe-UNI. Ukuchasana nge-19.60 yeedola kwathiwa lilona xabiso libalulekileyo le-UNI, kuthathelwa ingqalelo ukuba kukho iidilesi ezingama-2,900 zokuthenga udonga olomeleleyo kwelo nqanaba elathenga malunga ne-8.4 yezigidi ze-UNI.
Ukujonga ukomelela kolu donga lokuthenga, ukuwa okungaphantsi kwenqanaba le-19.60 leedola-njengokuba sibona okwangoku-kuya kubangela ukuba aba batyalomali babambe ukubamba kwabo ukunqanda ukubona utyalomali lwabo luhamba 'Kuphume Imali.'
Oko kwathiwa, ukuba ujingi omkhulu wehla kwi-UNI, i-IOMAP ibonise ukuba kukho nolunye udonga lokuthenga kwindawo yenkxaso ye- $ 18.04. Kolu donga lokuthenga, bekukho iidilesi ezingama-6,500 1.45 ezilungele ukuthenga malunga neethokheni ezizizigidi eziyi-XNUMX.
Ukungatshintshi yinkqubo yoTshintshiselwano oluSasazekileyo (i-DEX) eyenziwe nguHayden Adams kwi2018. I-DEX ivumela abatyali mali ukuba bathengise amathokheni e-ERC-20 ngendlela engagcinwanga ngokusebenzisa isoftware okanye iiwallet zekhompyuter. Ukungatshintshi kukhuphe ithokheni yolawulo (i-UNI) nge-airdrop nge-16 kaSeptemba 2020.
Amanqanaba aphambili e-UNI ojongiweyo-ngoFebruwari 8
Ukulandela ukuwa kutsha nje kwi-22.64 yeedola ngalo lonke ixesha kwiveki ephelileyo, i-UNI ibonakala ngathi ibuyile kwi- $ 17.23. I-cryptocurrency ngoku ithengisa ngakwindlela yethu enyukayo, njengoko imali yedatha ijolise kwi- $ 22.64 ATH. Nangona kunjalo, i-UNI kufuneka kuqala isuse ukungavumi kwe- $ 20.86 kwiiyure ezizayo.
Ukusilela ekucimeni oku kuchasana kungekudala kungathumela imali ye-cryptocurrency ezantsi kwi-18.65 yeedola yenkxaso, apho abathengi abangakumbi beediphu banokuza ebhodini.
Okwangoku, amanqanaba ethu aphikisayo akwi- $ 20.86, $ 21.68, kunye ne- $ 22.64. Ngelixa amanqanaba ethu enkxaso aphambili ayi- $ 18.60, $ 17.23, kunye ne- $ 15.84.
Imali iyonke yentengiso: $ 1.34 zezigidi
Imali engatshintshiswanga yentengiso: $ 5.8 billion
Ukungalawulwa kwamandla: 0.4%
tags iindaba, I-UNI, UNISWAP